Ejipta: Fa Nahoana No Ny 8 Jolay? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2011 8:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Italiano, polski, বাংলা, Português, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fanadihadiana manokana ataonay momba ny Revolisionan'i Ejipta 2011.
Niverina tamin-kery eo amin'ny kianjan'ny Tahrir indray androany ny Ejiptiana, ivon'ny revolisionan'izy ireo. Fa inona no mbola takian'izy ireo amin'izao revolisiona efa vita izao, efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony i Mubarak, ary tsy efa betsaka amin'ireo tànan-kavanany teo amin'ny fitondrana ve no any amponja? Tsy moramora izany, ary maro ireo mpitoraka bilaogy no niezaka ny hahazo ny antony hiverenan'ireo olona an-tapitrisany eo amin'ny kianjan'ny Tahrir indray raha efa teo izy ireo ny volana janoary.
Aleo ho any aloha iny fanonganana an'i Mubarak iny, fa betsaka koa ireo fangatahana tamin'ny Janoary no tsy mbola tanteraka. Sama Singer (@Sama_Singer) namintina ny fahazahoany ireo mety ho fangatahan'ny 8 Jolay tao amin'ny lahatsoratra am-bilaogy iray.
حد ادنى للأجور 1200 جنيه ، وحد اقصى للأجور ، مع مراقبة الاسعار حتى تتوافق مع محدودى
L.E. 1200 no karama farany ambany indrindra, ary koa karama ambony indrindra, miaraka amin'ny fanaraha-maso hanamarinana fa tonga tsara anaty poketran'ireo mahantra izany
Fitsaram-bahoaka ho an'i Mubarak, ireo zanany, ny fitondrany feno risoriso, ary ireo rehetra mameno risoriso ny tontolo politikantsika.
Fanomezam-boninahitra ireo maritiora, fanonerana ireo fianakaviany, ary fitsarana avy hatrany ny tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ireny.
Fanomezam-boninahitra ireo maratra, fanonerana azy ireo, ary fiantohan'ny fanjakana ny fandanian-dry zareo.
Fndraràna ireo mpikambana ao amin'ny antoko nationaly demokratika (N.D.P.) tsy handray anjara amin'ny raharaha politika farafahakeliny dimy taona .
Famoahana tsy misy hatak'andro ireo gadra politika sy nogadraina noho ny famoahany ny heviny nanomboka ny 25 Janoary sy talohan'io ka hatramin'izao.
Fanajanonana avy hatrany ireo fitsarana miaramila, sy famerenana ny fitsarana ireo efa nandalo izany ho eo anoloan'ny fitsarana sivily.
Nanoratra ihany koa izy ny amin'ny tokony hisian'ny fanadiovana ireo “rafitra feno risoriso” toy ny polisy, ny fampitam-baovao (media), ary ny rafi-pitsarana.
Mina Naguib (@MinaNaguib90) dia nanoratra mikasika ireo vaovao farany henon izay nandrisika azy handray anjara hatrany hatrany.
Roa andro lasa izay dia nijery vaovao aho, ary izao no tao: Suzan Mubarak nitaraina fa tsy manao jery atrika ireo mpiambina ny lapany ao Sharm rehefa miditra ny lapa izy, ary dia novàna izy ireo. Nanaraka izany ny vaovao momba ny fanemorana ny fitsarana ireo voalaza fa namono ireo revolisionera ary naverina namonjy ny andraikiny hatramin'ny 3 Septambra. Ka dia tena fanina aho, tsy haiko izay hatao sy holazaina!
Nanohy toy izao izy:
Nanaraka izany ny vaovao fampakarana didim-pitsaràna nataon'ny “Procureur General” momba ilay didy nanafaka an'i El-Maghraby sy El-Fiki Ghali ary Foudly. Tsy nahaloa-peo aho noho izany ary tsy azoko ny antony nahafaka moramora azy ireo, sy hoe tsara sa ratsy io fampakarana io! Ahoana no nahafahan'izy ireo!? Raha tsy nanao inon'inona ireo olona ireo, iza izany no tompon'antoka amin'ireny rehetra rehetra ireny? ny Reniko?
Nitranga ireny rehetra ireny taorian'ny fampiakarana fitsarana miaramila ny ny zanaka lahy sady tokan'ny renin'ny iray amin'ireo maritiora, noho ny zava-nitranga tao amin'ny Trano fampisehoana an-dapihazo El-Balloon andro vitsy lasa izay
Mohamed El-Sarty [Ar] sy Ahmad Taha [Ar] tetsy ankilan'izay dia nisafidy ny hampiasa eson-teny tamin'ny fanontaniana hoe maninona ny olona no tsy maintsy ho eny an-kianja Tahrir nefa ny polisy anie ka maneho fitondrantena mendrika sy milamina, ary efa vita soamantsara ny rariny ho an'ireo maritiora, ny Filan-kevitra Avo ao amin'ny Tafika dia mitsara fotsiny ny olon-tsotra eo anoloan'ny fitsarana miaramila ary ny miaramila manokan'ny fitondrana teo aloha dia tsaraina eo anoloan'ny fitsarana sivily. Mbola nizara sarinà polisy manompa tamin'ny tànany ireo mpanao fihetsiketsehana koa i Taha andro vitsy lasa izay.
Ary farany, Assemism dia naneho hevitra hafa mihitsy , ary nanoratra fa na izany aza ireo hery politika – araka ny heviny – dia mampiasa ny maritiora ho toy ny fitaovana ho amin'ny tsy fitiavan-tanindrazana. Nolazaina fa ny namany iray antsoina hoe Kareem Mounir dia niteny hoe:
“Androany aho dia tafaresaka tamin'ny renin'ny iray tamin'ireo maritiora, ary efa saika nitomany mihitsy. Resy lahatry ny fahamarinan'ny teny voalazany aho, nefa indrisy fa toa araraotin'ireo manodidina azy izy.”
Avy eo dia nitondra fanamarihana tamin'ny voalazan'ilay namany izy.
Azo antoka fa hery politika heverina ho tokony handray andraikitra ireo manodidina azy ireo nefa dia manao ny tenany ho toy ny mpanangona fako, esoriny ny dikan'ny hoe fitiavan-tanindrazana ary ampiasainy hatramin'ireo maritiora koa amin'ny tombotsoan-dry zareo manokana..